बेलायत उड्नुअघि देउवाले कसलाई दिए कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ? — Sanchar Kendra
बेलायत उड्नुअघि देउवाले कसलाई दिए कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई दिएका छन् ।
गृहमन्त्री खाणको सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको पत्र प्राप्त भएको छैन । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा दोस्रो वरियतामा रहेका खाणले कार्यवाहक जिम्मेवारी पाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री नरहेकाले गृहमन्त्री खाणले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
त्यस्तै काँग्रेस सभापति सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापतिको उम्मेदवारी कसैलाई नदिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दिएपनि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैलाई दिएका छैनन् ।
काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले कसैलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । यसअघि विदेश भ्रमणमा जाँदा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई कार्यवाहक उपसभापतिको जिम्मेवारी पाउँदै आएका थिए ।
उपसभापति निधिको स्रोतका अनुसार देउवाले अहिलेसम्म कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीबारे निधिलाई जानकारी दिइएको छैन ।
१४ औं महाधिवेशनमा साथ छोड्ने संकेत देखाएपछि देउवा र निधिको सम्बन्ध सुमधुर छैन । देउवा सभापतिमा दोहोरिन चाहेका छन् भने निधि पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।